Taageerayaasha Liverpool Oo Cod Ku Go'aamiyay Haddii Ay Kooxdooda Reds Xagaagan La Soo Wareegto Gareth Bale. - Gool24.Net
Taageerayaasha kooxda Liverpool ayaa la hor dhigay su’aal ah haddii ay jeclaan lahaayeen in ay xagaagan kooxdoodu la soo wareegto xidiga Madrid ku dhibtoonaya ee Gareth Bale.
Gareth Bale oo ka mid ah ciyaartoyda taariikhda kubbad cagta aduunka ugu qaalisan ayaa dhibaato wayn kala kulmaya soo laabashada Zinedine Zidane ee Real Madrid.
Gareth Bale ayaa loo sheegay in aanu qayb ka ahayn qorshaha xili ciyaareedka cusub ee Zidane waxayna ilaa hadda Madrid ku dhibtoonaysaa in ay hesho koox gacmaheeda ka saarta Gareth Bale.
Kooxo waa wayn ee Yurub ah ayaa Bale lala xidhiidhinayay waqtiyo kala duwan waxaana ka mid ah kooxaha Premeir League, PSG iyo Bayern Munich.
Gareth Bale ayaa sanadkii mushaar ahaan Real Madrid uga qaata 17 milyan yuro waana lacag badan oo ay dhibaato u arkaan kooxaha doonaya saxiixa xidiga reer Wales ee Bale.
Haddaba wargayska Liverpool Echo oo ka soo baxa magaalada Liverpool ayaa taageerayaasha Liverpool hor dhigay su’aal u dhignayd: “Miyaad doonaysaa in ay Liverpool la soo saxiixato Gareth Bale?”.
Waxaa jawaabta su’aahsan ka qayb qaatay in ka badan 24,000 kun oo jamaahiirta Liverpool oo bixiyay jawaabo kala duwan.
Guud ahaan boqolkiiba 65% ka mid ah taageerayaasha liverpool ayaa “Maya” ugu codeeyay in Bale ay kooxdoodu la soo wareegto halka boqolkiiba 35% kale ay ay dareeno iyo shuruudo kala duwan ku xidheen balse ayna diidanayn in Bale la keeno Anfield.
Haddaba qaar ka mid ah jawaabihii ay taageerayaasha Liverpool ka bixiyeen su’aashan ayaanu halkan idiinku soo koobnay:
Taageere Liverpool ah oo ka jawaabaya su’aasha Bale ee Reds ayaa soo qoray: “Maya. Markasta wuu dhaawac badan yahay, isla markaana dhaqaale ahaan ayayna micno u samaynayn”.
Taageere kale ayaa isna soo qoray: ” Haa, laakiin waxa uu walwal yari ka jiraa qiimaha”.
Laakiin taageere kale oo Liverpool ah ayaa shuruud macquul ah keenay wuxuuna soo qoray: “Haddii uu isagu mushaarkiisa hoos u dhigayo, kadib waxaan ku qaadan lahaa amaah laba sanadood ah oo ay doorashadu tahay in la iibsado”.
Taageere kale oo Liverpool ah oo Bale fikradiisa ka dhiibanaya ayaa soo qoray: “Way fiicanan kartaa in aad kooxda ku haysato Bale, laakiin kaliya waa qiimaha ku haboon ama in muhaar ahaan loo siiyo inta uu ciyaaro. Maya 300,000 kun oo todobaadkii ah”.
Fikrad kale oo uu taageere Liverpool ahi ka qabo in kooxdiisa Reds la soo saxiixato Gareth Bale inta suuqu furan yahay ayuu ku yidhi: “Amaah iyo in Real ay mushaarkiisa kala badh bixiso”.
Ugu danbayn taageere kale ayaa soo qoray: “Haddii aan daacad noqdo, waxaan ka door bidayaa in in Harry Wilson fursad la siiyo xili ciyaareedkan, haddii aynu kooxda ka raadinayno doorasho dhex hore ah”.
Haddaba akhriste, haddii aad taageere Liverpool ah tahay, maxaad adigu kaga jawaabi lahayd su’aashan jamaahiirta kooxdaada Reds ay siyaaban uga jawaabeen?